Rikoooo dia manolo-tena amin'ny fiarovana ny fiainanao manokana sy ny fampivelarana ny haitao izay manome anao traikefa matanjaka sy azo antoka indrindra an-tserasera. Ity fanambarana manokana ity dia mihatra amin'ny tranokala Rikoooo.com ary mifehy ny fanangonana sy fampiasana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokala Rikoooo, dia manaiky ny fomba fanao data voalaza ao amin'ity fanambarana ity ianao.
Fanangonana ny mombamomba anao manokana
Rikoooo manangona fampahalalana azo fantarina manokana, toy ny adiresy mailakao sy ny anaranao. Rikoooo koa dia manangona fampahalalana momba ny demografika tsy fantatra anarana, izay tsy manan-tsahala aminao, toy ny kaody zip, taona, miralenta, safidinao, zavatra tianao ary tianao. Misy koa ny fampahalalana momba ny fitaovan'ny solosainao sy ny rindrambainao izay angonin'i Rikoooo ho azy. Ity fampahalalana ity dia mety misy: ny adiresy IP anao, ny karazana browser, ny anaranao, ny fotoana idirana. Ity fampahalalana ity dia ampiasain'i Rikoooo amin'ny fampandehanana sy fikojakojana ny kalitaon'ny serivisy, ary koa hanomezana statistika ankapobeny momba ny fampiasana ny tranokala Rikoooo. Na izany aza, tadidio fa raha milaza fampahalalana miavaka na antontan-kevitra mora tohina ianao amin'ny hafatra ampahibemaso, ohatra, avy amin'ny forum, dia mety hanangona sy hampiasan'ny hafa ity fampahalalana ity. Fanamarihana: Rikoooo dia tsy mamaky iray amin'ireo fifandraisana an-tserasera tsy miankina aminao. Rikoooo dia mamporisika anao hamerina hijery ireo fanambarana momba ny tsiambaratelon'ireo tranonkala ampifandraisinao amin'i Rikoooo hahafahanao mahatakatra ny fomba fanangonana, fampiasana ary fizaranao ireo mombamomba anao. Rikoooo dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanambarana momba ny tsiambaratelo na ny atin'ny tranokala ivelan'ny Rikoooo.com.
Fampiasana ny mombamomba anao manokana
Rikoooo dia manangona sy mampiasa ny mombamomba anao amin'ny fampandehanana ny tranokala Rikoooo.com ary manome ny serivisy nangatahinao. Rikoooo koa dia mampiasa ny mombamomba anao hahafantarana anao momba ny fisintomana vaovao sy ny vaovaon'ny tranokala. Mety mifandray aminao koa i Rikoooo amin'ny alàlan'ny fangatahana fangatahana natao hahazoana ny hevitrao momba ny serivisy ankehitriny na ny serivisy vaovao mety hatolotra. Rikoooo dia tsy mivarotra na manofa ny lisitry ny mpanjifa amin'ny antoko fahatelo. Rikoooo dia tsy mampiasa na manambara fampahalalana manokana momba ny tena manokana, toy ny firazanana, ny fivavahana na ny fifandraisana politika, raha tsy misy ny fanekenao mazava. Rikoooo dia manara-maso ireo pejy notsidihin'ireo mpikambana ato aminay ao amin'ny Rikoooo.com, mba hamaritana izay serivisy no be mpitia indrindra. Ny tranokala Rikoooo dia mety hamoaka ny mombamomba anao, tsy misy fampandrenesana, raha takian'ny lalàna izany.
Famafana ny mombamomba anao manokana
Raha te hampiasa ny zonao hamafa ny mombamomba anao manokana dia tsy maintsy miditra ao amin'ny kaontinao Rikoooo ianao avy eo mankany amin'ny My Profile pejy, avy amin'ity pejy ity tsindrio ny Delete ny kaontiko eo amin'ny zoro ambony ambony. Hesorina ao amin'i Rikoooo ny datao manokana, tsy azo ovaina izany hetsika izany.
Ny mombamomba anao manokana izay angonin'i Rikoooo dia mitazona ao anaty tontolo azo antoka. Ny olona miasa ho an'ny Rikoooo dia takiana amin'ny fanajana ny tsiambaratelon'ny fampahalalanao.
Mba hiantohana ny fiarovana ny mombamomba anao manokana dia mampiasa ireto fepetra manaraka ireto i Rikoooo:
Fitantanana fidirana - olona nahazo alàlana
Fitantanana fidirana - lohahevitra momba ny angona
Rindrambaiko fanaraha-maso ny tambajotra
Rikoooo dia manolo-tena amin'ny fitazonana tsiambaratelo avo lenta amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo fanavaozana teknolojia farany indrindra hahazoana antoka ny tsiambaratelon'ny fifanakalozana ataonao. Na izany aza, satria tsy misy mekanika manome fiarovana azo antoka indrindra, dia misy hatrany ny risika mety hitranga rehefa mampiasa Internet handefasana mombamomba anao manokana.
Rikoooo dia tapa-kevitra ny hanaja ny lalàna mifehy ny lalàna frantsay
Fiovana amin'ity fanambarana ity